Xalayaa: Dhaamsa Hidhamtoota Oromoo
Date: March 21, 2012Author: Oromedia 0 Comments
Xalayaa Bitootessaa: Duraan dursee nagaan koo inni kabajaa isiniin haa ga’u. Akkam jirtu?
Nagaa kootti aansuudhaan, dhaamsa ijoolleen keenya hidhaa keessa jiran dhaammtanin siniin gahuu barbade. Isaanis waggaa hedduuf hidhaa kessa turanii, adabbii isaanitti murta’e fixatanii garuu osoo dhiifama hin gaafatin isin hin gadhiisnu jedhanii amma waggaa tokkof tola hidhaa jiru.
Ijoolleen Oromoo Oromummaa isaaniin yakkamanii hidhamanii jiran kunneen yeroo ammaatti mana hidhaa Baatuu (Zuwaay) keessatti dararama jiru. Maqaan isaaniis:
1. Gammachis Kafanii
2. Shimallis Kafanii
4. Taadesee Balaay fa’aa dha.
Ammaaf, kanan maqaa isaanii yaadadhutu isaan kana malee, amma illee Oromooti hedduun mana hidhaa keessatti waan Wayyaaneef ergamuu didanii fi Oromummaa isaaniitti jaboo ta’an qofaaf adaba durumaanuu seeraan ala itti darbeen ala ammas hidhamaa jiru.
Hidhamtooti kunneenis, sagaleen isaanii akka qaamota mirga dhala namaaf falmanii fi keessattuu, Oromoota biraan akka gahamuuf dhaamsa dabarsatanii jiran.
Nagaa fi kabajaa waliin,
Previous Previous post: AFAAN OROMO CURRICULUM SHORT-CUT IN MAQII, BOTEE, BUSHOOFTUU
Next Next post: Can we adapt Gadaa conflict resolution mechanism to our personal and professional goal setting?